DHAGEYSO:William Ruto oo sheegay in la siyaasadeeyay la dagaalanka musuqmaasuqa | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:William Ruto oo sheegay in la siyaasadeeyay la dagaalanka musuqmaasuqa
DHAGEYSO:William Ruto oo sheegay in la siyaasadeeyay la dagaalanka musuqmaasuqa
Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo wareysi gaar ah siiyay Radio Jambo ayaa sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa ee gudaha wadanka uu noqday mid siyaasadeysan.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay in hadii la isku hayo arrimo siyaasadeed aan loo baahneyn in qofka lagu bartilmaameedsado siyaabo kale .
Ruto ayaa xusay in siyaasiyiinta xulafada la ah ay walaac ka muujiyaan in ay meel fagaaro ah isaga kula kulmaan maadaama ay ka cabsi qabaan in loo adeegsado hay’adaha dambi baarista ee dalka.
Garabka mucaaradka ee dalka ayuu ku eedeyay inuusan wax qorsho horumarineed ah u hayn dadweynaha sidaas awgeedna uu ku mashquulsan yahay inuu carqaladeeyo dhaqangelinta barnaamijyada maamulka talada haya ee Jubilee.
William Ruto oo su’aal laga weydiiyay turxaan bixinta saraakiisha doonaya in ay ku biiraan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka ee IEBC ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in turxaan bixinta loo sameeyo qaabka waafaqsan xeerarka dalka u degsan .
Waxaa uu sheegay in hadii looga guulaysto doorashada 2022-ka uu aqbali doono natiijada soo baxdo.
Previous articleDHAGEYSO:Mid ka mid ah soomaalida hantidooda lagu boobay Koonfur Afrika oo Star FM u warramay